Koobka Fedraalka oo Muqdisho ka socda (Benadir 5-0 K/G) – Calan Qaran
July 16, 2016	by Shakra Hussein
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Somalia waxaa ka billowday tartan aad u xiisa badan oo loo qabtay kooxo matalaya maamul goboleedyada ka jira dalka Somalia.
Koobkan loogu magac daray Koobka Fedraalka ayaa waxaa ka soo qeyb galaya naadiyo kala matalaya Koofur Galbeed, Puntland, Jubbaland, Gal-mudug State, Sh/dhexe/Hiiraan iyo gobolka Benaadir oo marti galiyay.
Furitaanka koobkan waxaa ka qeyb galay M/weyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo laaday kubaddii lagu furay ciyaarta oo ay isku arkeen Koofur Galbeed iyo Benaadir, waxaana 5-0 ku adkaaday xulka matalayay gobolka Benaadir.
Group A waxaa ku wada jira Benaadir oo hogaanka haya, Koofur Galbeed iyo Puntland, Halka Group B ay ku wada jiraan Galmudug, Jubbaland iyo Sh/dhexe/Hiiraan.
Koobka Fedraalka ayaa fursad cusub oo Is dhex gal abuuri kara, laakiin waaya aragga ciyaaraha kubadda cagta ayaa aad u dhaliilay sababtoo ah dastuurka Somalia waxaa ku qoran in Fedraalku ku kooban yahay siyaasadda ee arrimaha bulshada uusan quseyn.
Waxaa dadka qaarkood is weydiinayaan maxaa diidaya in 18-ka gobo lee Somalia loo qabto tartanka? sidii Garawe ka dhacday sanadkii 2011.
Shakra Hussein, Calan Qaran
Ku Ciil bax Codkaaga